काठमाडौंमा ट्याक्सी भित्र चढेका युवायुवतीले यस्तो गरेपछि ….. – Ujyaalo Patrika
काठमाडौंमा ट्याक्सी भित्र चढेका युवायुवतीले यस्तो गरेपछि …..
ट्याक्सी चालक अमृत सापकोटालाई २ जनाले दरबारमार्गमा हात दिए। उनले ट्याक्सी रोके। जोडी नै ट्याक्सी चढे र चक्रपथ लैजान भने। उनले बा१झ ३५० नम्बरको ट्याक्सी चक्रपथतिर हु’इँक्याए। युवा–युवती पछाडि छि’ल्लीरहेका थिए। उनले त्यत्ति वास्ता गरेनन्। आफ्नै सुरले चलाइरहे। चुनदेवीतिर पुगेपछि पछाडिको आवाज बदलियो। हैन के गर्न थाले भनेर यसो हेरेको त युवती मुख मै थु’न’मा व्यस्त, युवा म’स्त। झो’क च’ल्यो उनलाई ‘के गरेको’ भनेर कराएपछि दुवै रोकिए।
‘ट्याक्सीमा त्यस्तो देख्दा झो’क च’ल्यो, यो तिमीहरुको गेष्ट हाउस हो भनेर झ’पारे,’ अमृतले भने, ‘तिमीहरुलाई प्रहरी चौकी लैजाऊँ भनेपछि सरी भनेर भाडा तिरेर हिँडे।’ ट्याक्सी सहज यातायातको साधन हो। तर केही यात्रुले त्यसैलाई म’स्तीको साधन बनाइदिँदा ट्याक्सी चालकहरु हैरान रहेछन्। ट्याक्सीमा यात्रुले गर्ने व्यवहारबारे बुझ्न उपत्यकाका झण्डै २ सय ट्याक्सी चालकसँग भेट्दा अधिकांश म’स्तीखोर यात्रुबाट कुनै न कुनै बेला है’रान बनेका रहेछन्।
पहिला काठमाडौंमा कालो विक्रम ट्याम्पु चल्दा युवा जोडीले त्यसलाई डेटिङ स्थलै बनाउँथे। सरकारले त्यसलाई काठमाडौंबाट ल’खे’टेप’छि जोडीको तारो ट्याक्सी परेको देखियो। कोही चु’म्मा’चा’टी गर्ने, कोही ट्याक्सीमा यौ’ न स’म्प’र्क रा’ख्न खो’ज्ने, कोही झि’ल्लि’एको कुरा गरेर है’रान पा’र्ने रहेछन्।
कुनै ट्याक्सी चालक हेरेरै चित्त बुझाउने गरेको भेटियो, कोहीले भने थ’र्का’एर भ’गा’उने गरेको भेटियो भने केही चालकले ‘जे सुकै गरुन्’ भनेर वास्तै नगर्ने पनि भेटियो।
चालक सापकोटाकै अर्को अनुभव पनि त्यस्तै रहेछ। ठाउँ पनि दरबारमार्ग नै। साँझतिर २ जना केटी र ३ जना केटा ट्याक्सीमा आए। एकजना केटा चालकसँगै बसे। ४ जना पछाडि बसे। केटीहरु केटाको काखमा बसेका थिए।पछाडी अर्कै खालको आवाज आएपछि हेर्दा त उनीहरु यौ’ न स’म्प’र्कमा लि’न रै’छन्। केटाको संख्या धेरै भएकाले उनले केही बोलेनन्। भनेको ठाउँमा लगेर झा’रि’दिएँ। पछाडि बसेका केटाहरु पा’इन्ट मि’लाउँदै उ’त्रिए।
‘बेलुकातिर केटा–केटी चढे भने चनाखो भइहाल्नुपर्छ। नत्र त ट्याक्सीलाई नै गेष्ट हाउस बनाइदिन्छन्,’ उनले भने, ‘प्रायः हप्तामा एक ट्रि’प यस्तै पर्छन्। कसैलाई ह’प्का’यो। कहिलेकाहीँ थाहा पाएको न’पायै ग-यो।’ दरबारमार्गमा बेलुका १० बजेतिर भेटिएका ट्याक्सी चालक अर्जुन कार्कीको ट्याक्सीमा पनि जोडीले नै च’र्ति’क’ला गरेछन्। बेलुका १२ बजेतिर बागबजारबाट उनको ट्याक्सीमा एक जोडी चढे। उनीहरुले भने ‘दाइ गौरीघाट जाउँ।’
उनीहरुको उमेर त्यस्तै १७–१८ थियो होला। ट्याक्सी बागबजारबाट कमल पोखरी हुँदै अगाडि बढ्दै थियो। पछाडि बसेकाहरु छा’डा बो’ले’र है’रा’न। के गरिरहेका छन् भनेर उनले चालकसँगै सीसामा हेरे। पछाडि त दुवैजना पूरै क’प’डा खो’ले’र च’लि’रा रैछन्। ज्ञानेश्वर पुग्न लाग्दा त ट्याक्सीमै ह’नि’मु’न मनाउने तयारी पो गरे। उनले ट्याक्सी रोकेर थ’र्का’ए’छ’न्। उनीहरु के थ’र्कि’न्थे। उल्टै ‘ट्याक्सी चालक होस् ट्याक्सी चला, धेरै न’करा’ भनेर थ’र्का’ए।
माया–प्रेमका कुरा गर्दै थिए। म तिमीलाई यति माया गर्छु, उति माया गर्छु भन्दै थिए। यसो साइड बीचको सिसाबाट हेरेँ। दुवै कि’स खाँ’दै म’डा’रि’इर’हे’का रहेछन्।
उनले ट्याक्सी चलाए। अगाडि प्रहरी देखेपछि ‘प्रहरीलाई भन्दिऊँ’ भनेपछि ब’ल्ल क’पडा ल’गा’ए’छन्। ‘राति यस्ता प्यासेन्जर त कति भेटिन्छन् कति,’ उनले भने, ‘कहिले काहीँ त दिउँसै पनि उस्तै भेटिन्छन्। कति थ’र्का’उ’नु।’ अधिकांश ट्याक्सी चालकको अनुभवमा बेलुका १० बजेपछि भेटिने यात्रु अधिकांश यस्तै हुन्छन्। डान्सबार र लाउन्जमा गएर जोडी खोजेर आउनेहरु, पहिल्यै जोडी बाँ’धिए’र रेष्टुरेन्ट छिरेकाहरु र केही यौ’ न’क’र्मी’सहित आउने यात्रुले ट्याक्सीमै म’स्ती’ ग’र्ने गर्छन्। यस्ता ह’र्क’त गर्नेको निश्चित उमेर समूह रैन’छ। भर्खर जुंगाको रेखी बसेकादेखि अ’धवैंशेसम्मकाले है’रा’न बनाउने रहेछन् ट्याक्सी चालकलाई।
चालकहरुसँग शुक्रवारले गरेको कुराकानीमा यस्ता च’र्ति’क’ला गर्ने केही प्रेमी–प्रेमिका नै हुन्छन्। रो’मा’न्स गर्ने ठाउँ न’पाउँदा ट्याक्सीको उपयोग गर्न खोज्छन्। तर यस्ताहरु प्रायः अलि ह’च्कि’न्छन्’ रे।
कोही म’दि’रा’को मा’त च’ढे’का जो’डी हुन्छन्। यस्ता जोडीलाई केही वास्ता हुन्न। चालकले पछाडि हेर्दा हेरेरै भए पनि चि’त्त बु’झाउँ गुरुजी भनिदिन्छन्। जति सम्झाए पनि हुन्न त्यस्तालाई। प्रहरीकोमा लै’जाऊँभ’न्दा कोही कोही मात्र ह’च्कि’न्छन्। चालकहरुको अनुभवमा कोही ला’उन्ज र बारमा म’स्ती ग’रेर घर फर्किएका जोडी हुन्छन्। कोही गेष्ट हाउस र होटल हिँडेका। बाहिर रा’त बि’ताउ’न नसक्ने, घरै जानुपर्ने केटी साथीलाई ट्याक्सीमा छाड्न सँगै हिँडेकाले समेत ट्याक्सीमै चा’न्स मा’र्छ’न्। म’दि’रा’मा’ ‘धु’त भएर सहमतिमै गेष्ट हाउस र होटल हिँडे पनि म’न थाम्न न’सकेर ट्या’क्सीमै ता’त्ति’ने जो’डी पनि उ’त्तिकै हुन्छन्।
ट्याक्सी चालक दीपक खड्काको अनुभव:
राति करिब ११ बजे काठमाडौंको ग्रिनल्यान्डबाट लाजिम्पाट जान एक जोडी ट्याक्सीमा चढे। उमेर त्यस्तै २२, देखि २५ हाराहारी। बेलुका प्रायः पछाडिको सिटमा बत्ती बालिँदैन। बलेको थिएन। मधुरो लाइट भने हुन्छ। उनी आफ्नै तालमा ट्याक्सी चलाइरहेका थिए। माया–प्रेमका कुरा गर्दै थिए। म तिमीलाई यति माया गर्छु, उति माया गर्छु भन्दै थिए। यसो साइड बीचको सिसाबाट हेरेँ। दुवै कि’स’ खाँ’दै म’डा’रिइ’र’हेका रहेछन्।
उनले ‘दाइ तपाईंले के गर्नुभएको यस्तो’ भनेँ। उनीहरुले ‘तँलाई पैसा दिएकै छ। पैसा तिरेपछि ट्याक्सी हाम्रै हुन्छ’ पो भने। उनले लाजिम्पाट पु-याएर फर्किए। एक जोडी म’स्किँ’दै, जि’स्किँ’दै ट्याक्सी भएको ठाउँमा आएर गोकर्ण जाऊँ न भने। उनीहरु गफमै मस्त थिए। गफ सुन्नै ला’ज लाग्नेखालको थियो रे। ‘अस्ति क’त्ति’को म’ज्जा’ आ’यो’ केटाले सोध्यो। ‘मलाई त निकै दु’ख्यो नि’ केटीले जवाफ फर्काइन्। केटाले आज रमाइलो गर्नुपर्छ है भने।
केही भने अ’चम्म’कै यात्रु पनि भेटिने रहेछन्। उनको यस्तै अनुभव छ। चाबहिल चोकमा बिहान ३ बजेतिर एउटा मान्छे आयो। दाइ म तपाईंको ट्याक्सीमा अएर सुत्छु भन्यो। बिहान ७ बजेतिर उठेर १५ सय तिरेर गयो।
‘नाइटमा भेटिने अधिकांश यात्रु यस्तै हुन्छन्। प्रायः म’स्ती गर्न नै हिँडेका भेटिन्छन्,’ उनले भने, ‘८ वर्षको अनुभवमा आ’पत’विप’तमा परेका त कमै भेटिएका छन्।’
ठमेलको पीपलबोट नजिकै फेला परेका ट्याक्सी चालक कृष्णप्रसाद ढुंगानाको अनुभव पनि रमाइलै छ। उनी प्रायः बेलुकातिर त्यतै हुने रहेछन्। यात्रु पाइने भएकाले प्रायः त्यतै बस्ने गरेको उनले सुनाए।
गोकर्णकोे एउटा रिसोर्टमा बस्ने कुरा गर्दै थिए। गोकर्णको रिसोर्ट अगाडि रोक भने उनले रोके। पैसा तिरेर दुवै गए। ‘ट्याक्सी चढाएदेखि म’स्तसँ’ग कि’स ग’र्दै म’ज्जा लिइरहेका थिए,’ कृष्णले भने, ‘मेरो काम भनेको ठाउँमा पु-याउने थियो पु-याइदिएँ।’ कसै कसैको योजना भने पूरा हुन्न।
१० वर्षदेखि ट्याक्सी चलाउँदै आएका गणेशबहादुर खड्काले यस्तै एक अनुभव सुनाए। उनले नक्सालबाट एक जोडीलाई पिक गरेर गठ्ठाघरतिर लगे। पछाडि उनीहरु एकै रुममा बस्ने कुरा गर्दै थिए। कि’स खा’इर’हे’का थिए। लभ यु र सव यु भन्दै थिए। गठ्ठाघर नपुगुञ्जेल म’स्ती’मै थिए। जब गठ्ठाघर पुग्न लाग्यो कुरा बि’ग्रि’एछ। केटी मात्रै उत्रिइन्। केटा ट्याक्सीमै फर्कियो। उनले केटालाई ल्याएर नक्सालमा छोडिदिए। ट्याक्सीभरि भु’त्भुता’इरहेको थियो रे केटा।
केही यात्रु भने वि’वा’द भएपछि ट्याक्सीभित्रै हा’ना’हा’न गर्ने पनि भेटिने रहेछन्। ट्याक्सी चालक गणेश खड्काका अनुसार प्रायः डान्सबार र डिस्कोतिरबाट आएका यात्रु आ–आफैँ झ’ग’डा गर्ने रहेछन्। त्योसित किन टाँ’सि’एर ना’चे’को, अर्कोसँग किन बोलेको भनेर झ’ग’डा गर्ने रहेछन्।
‘आफ्नो गर्लफ्रेण्ड अर्कोसँग नाचिन्, कुरा गरिन् भने झ’ग’डा पर्ने रहेछ,’ उनले भने‘ ‘ट्याक्सी चढ्दा ठा’स्सठु’स्स गरेर चढ्छन्। वि’वा’द हुँदै जान्छ। कोही गा’ली’ मा’त्र गर्छन्, कोही त हा’ना’हा’नै ग’र्छन्।’
केटी खोज्ने ग्राहक
ट्याक्सी चालकको अर्को सास्ती हो यौ’ नक’र्मी खोजिदिन आग्रह गर्ने यात्रु। हुन पनि केही ट्याक्सी चालकको धन्दा यौ’ न’क’र्मी मिलाउने पनि हुन्छ। व्यावसायिक रुपमा यौ ‘नकोठी चलाएर बसेकाहरु, र व्यक्तिगत रुपमा यस्तो ध’न्दा गर्नेहरुले ग्राहक खोज्न केही चालकलाई प्रयोग गर्ने गर्छन्।
केही यस्ता चालक पनि नभेटिएका हैनन्। एक ट्याक्सी चालकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा यौ’ ‘नकर्मी खोज्ने यात्रुलाई मिलाइदिने गरेको स्विकारे। होटलमा लैजान खोजे सम्पर्क नम्बर दिने, कोठीमै जान खोजे लैजाने गरेको उनले बताए।
‘पु-याइदिएबापत २ हजारजति आउँछ, त्यही खोज्न आएकालाई पु-याउनु अ’प’रा’ध पनि त हैन,’ ती ट्याक्सी चालकले भने, ‘तर म आफैँ यात्रुलाई सोध्दिनँ। सोधे भने स’म्पर्क गराइदिन्छु।’ तर सबै चालक दलाल हुन्नन्। तर प्रायः यात्रुमा त त्यही छाप छ। त्यसैले बेलुकातिर ‘केटी मिला’इ’देऊ न’ भन्ने यात्रु टन्नै भेट्छन् ट्याक्सी चालकहरुले।
ट्याक्सी चालक अमृत सापकोटाको अनुभवमा प्रायः जसो भारतीय यात्रुले ‘ल’ड्की मि’लेका ‘क्या’ भन्दै है’रा’न बनाउँछन्। उनीहरुले केटी मि’लाइ’दे’ऊ पैसा दिन्छु भनेर है’रा’न बनाउने गरेको उनले बताए।
‘प्रायः भारतीय पर्यटकले ट्याक्सी चालकलाई यौ’ ‘नकर्मीको द’लालै सम्झँदा रहेछन्,’ सापकोटाले भने, ‘जो भेटिए पनि दाइ ल’ड्की’ मि’ला’इदे’ऊ न भन्ने मात्र भेटिन्छन्। ल’ड्की’स’ड्की थाहा छैन भन्दा पत्याउँदैनन्। ह’प्का’उनै’पर्छ।’ भारतीय पर्यटक मात्रै हैन, यतैतिरका आन्तरिक पर्यटकले पनि यस्तै गरी है’रा’न बनाउने रहेछन्।
मैतिदेवी चोकमा यात्रु कुरेर बसेका ट्याक्सी चालक प्रेम दुलालका अनुसार प्रायः ठमेलतिर आउने यतैका नेपालीले पनि गुरुजीसँग केटीको क’न्ट्रया’क्ट होला भनेर सोध्छन्। छैन भन्दा पत्याउँदै पत्याउँदैनन्।
‘राति ११ बजेतिर बसपार्कमा २ जना केटा आएर ठमेल जाऊँ भने। २ सय ५० दिन्छु भने। म तयार भएँ,’ दलालले भने‘ ‘ठमेलतिर पुगेपछि गुरुजीको कन्ट्या’कमा केटीहरु होलान् भनेर सोधे। त्यस्ता खालका केटीहरु छैनन् भनेँ। ट्याक्सी रोक्नुस् हामी अर्को ट्याक्सीमा जान्छौ भनेर ओर्लिए।’ शुक्रवार साप्ताहिकबाट
ट्याक्सीमा ठगि कहिले रोकिन्छ ?
काठमाडौंमा ट्याक्सी चढ्नलाई गोजी मोटो हुनुपर्छ । मध्यमवर्गीय नेपालीहरु हत्पत्ति ट्याक्सी चढ्ने आँट गर्दैनन् । त्यसो त ठगिने उच्च सम्भावनाका कारण पैसावालहरु पनि ट्याक्सीमा यात्रा गर्न नपरोस भन्ठान्छन् ।
तर, सार्वजनिक यातायातमा यात्रा यति सकसपूर्ण छ कि कहिलेकाहीँ ट्याक्सी चढ्ने वाध्यता परिहाल्छ । ट्याक्सी प्रयोग गर्नेहरुको सख्या बढ्दो रहेकाले उपत्यकालगायत मुख्य शहरहरूमा ट्याक्सी व्यवसाय फस्टाएको छ । ट्याक्सी व्यवसाय गर्न चाहनेको सख्या जति धेरै ट्याक्सी यात्रुहरुका गुनासा पनि उति धेरै छन् ।
यात्राको लागी छिटो र सजिलो हुने भएकाले ट्याक्सीको माग धेरै हुने गरेको छ । तर ट्क्सी चालकको ठगी पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । यात्रुको प्रतीक्षामा बसेका ट्याक्सी मिटरमा जान मान्दैनन् । ट्याक्सी चालकले तोकेको मूल्य तिर्न सर्वसाधारण बाध्य भएका छन् । हतारमा हिड्नु पर्ने हुंदा उनिहरुले मागेकै भाडा तिर्नुपर्ने आफुहरुको बाध्यता पर्ने ट्याक्सी यात्रुहरु बताउछन् । यात्रुहरुले आफु ठगिएको गुनासो बर्षाैदेखि गर्दा पनि स्पष्ट नीति, पारदर्शी व्यवहार, उचित प्रतिफल र यात्रुलाई ठगीबाट बचाउने जिम्मेवारी सरकारले पालना नगरेको यात्रुहरुको भनाई छ ।
यता ट्राफिक प्रहरीले भने ट्याक्सी सम्बन्धमा विगतका वर्षमा भन्दा उपत्यकमा चल्ने ट्याक्सीहरुले मिटरमा जाने नमाने, वा तोकिएको भाडादर भन्दा बढी भाडा लिएमा आफुलाई खबर गर्न भन्दै आएको छ । त्यसपछि कारबाहीको प्रक्रिया तिब्र पार्ने उसले बताएपछि अधिकाश समय यात्रुहरु हतारमा हुने गर्दा भाडामा बार्गेनिङ गर्न भ्याउदैनन् । ट्याक्सी चालकले भढी भाडा मागेमा ट्राफिकलाई उजुरी भन्दा उनीहरु मागेजती भाडादिन निरिह भन्दै आएका छन् ।
काठमाडौंमा ट्याक्सी चाहियो ? अब मोबाइल एपबाटै बोलाउनुहोस्
भनेको समयमा ट्याक्सी नपाएर हैरान हुनुहुन्छ ? काठमाडौंमा आफू भएकै ठाउँमा भन्ने वित्तिकै ट्याक्सी पाइँदैन । अझ मिटरमै गुड्ने ट्याक्सी पाउन त झन् गाह्रो ।
तर अब चिन्ता लिनुपर्दैन् । एउटा मोबाइल एप मोबाइलमा डाउनलोड गरिराख्नुहोस् मौकामा काम लाग्न सक्छ । अन्भर स्मार्ट ट्याक्सी नामक एपबाट अब तपाईले सजिलै काठमाडौंमा ट्याक्सी बुक गर्न सक्नुहुन्छ । अन्भर संस्थापकका अनुसार सो एपमा जोडिएका २ सय ट्क्यासीमा जिपिएस प्रविधि जडान गरिएको छ ।
उनीहरुले सेवा दिइरहेको अवस्थामा सो जिपीएसलाई अन गरिरहेका हुन्छन् । मोबाइल एपबाट सजिलै ती ट्क्यासीहरुलाई आफूले अनुरोध गर्न सकिन्छ ।
कसरी खोज्ने ट्याक्सी ?
अन्भर स्मार्ट ट्क्यासी नामक एप डाउनलोड गरेपछि त्यसमा आफ्नो विवरण राखेर पहिलो पटक रजिस्टर गर्नुपर्छ । त्यसपछि तपाई सो एप प्रयोग गरेर ट्याक्सी खोज्न सक्नुहुन्छ । सो एप खुल्ने वित्तिकै तपाई भएको स्थान देखाउँछ । त्यसपछि तपाईले आफू जाने स्थानमा क्लिक गर्नुपर्छ । त्यहाँ अक्षरमा लेख्न पाउने सुविधा पनि छ । त्यसपछ एपले अटोमेटिक रुपमा सबैभन्दा छोटो बाटो सजेस्ट गर्छ । त्यसपछि चाहिँ तपाईले नजिकै रहेको फाइन्ड ट्याक्सी अप्सनमा गएर ट्याक्सी खोज्न सक्नुहुनछ । तपाईको नजिकै रहेका ट्याक्सीहरू त्यहाँ देखाउँछ ।
आफ्नो नजिकै रहेको ट्याक्सीलाई तपाईले अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईले गरेको अनुरोध ट्याक्सीले स्विकारेपछि तपाईले ट्याक्सी लिएर हिँड्न सक्नुहुनछ । आफ्ना केही कुरा भएमा एप मार्फतै चालकलाई भन्न पाउने सुविधा पनि त्यहीँ रहेको छ ।
काठमाडौ । अनौपचारीक रुपमा नेकपा विभाजन भएपछि दुवै समुहका नेताहरु अहिले जिल्ला दौडाहामा छन् । दुई दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सम्बोधनका लागि धनगढी पुगेका थिए भने अन्य केही नेता जिल्लामा कार्यक्रम गर्दै ब्यस्त छन् ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समुहका नेताहरु पनि गृहजिल्लामा राजनीतिक कार्यक्रम गर्न पुगेका छन् । यस्तै कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न गएकी बिना मगर आफ्नै गृहजिल्लामा लखेटिएको भन्दै भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
नेकपा प्रचण्ड-माधव नेपाल समुहकी नेतृ तथा पूर्व मन्त्री बिना मगर आफ्नै गृहजिल्लामा लखेटिएको बताइएको छ । कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न गएकी बेला स्थानीयहरूले बिना मगर मुर्दावाद भन्दै चर्को नाराबाजी लगाएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
स्थानीहरूले टायर बालेर कालो झन्डा समेत देखाएका छन् ।कालोझण्डा देखाउने स्थानीय र प्रहरीबीच सामान्य झडपसमेत भएको थियो। प्रचण्ड(माधव नेपाल समुहको पछिल्लो रवैयामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीयहरूले चर्को नाराबाजी गरेका हुन्र।
Previous पो’र्नह’बमा १७-१८ वर्षका नेपाली किशोरीहरु यस्तो अवस्थामा देखिन थाले
Next एउटा ढुङ्गाले बनायो रातारात करोडपति . .